Madaxa Hay’adda ka hortagga masiibooyinka ee Maamulka Puntland oo shacabka uga digay dufaanta Luban – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaMadaxa Hay’adda ka hortagga masiibooyinka ee Maamulka Puntland oo shacabka uga digay dufaanta Luban
Hiiraan Xog, Maamulka Puntland ayaa shacabka degan deegannada laga yaabo inay duufaanta Luban ku dhufato ugu baaqay inay ka fogaadan goobaha biyo mareenada, taasoo ku soo fool leh xeebaha waqooyi bari Soomaaliya.
Madaxa Hay’adda ka hortagga masiibooyinka ee maamulka Puntland Cabdullaahi Xaashi Cayrow, ayaa sheegay in maamulada, iyo saraakiisha ciidamada ee ku sugan goobaha laga baqayo inay ku dhufato duufaanta Luban ku wargaliyeen inay shacabka u sheegan inay meel iskugu tagaan.
“Muddo Seddex maalmood ka hor ayaan billownay in aan la xiriirno, maamulada iyo saraakiisha goobaha laga cabsanayo inay ku dhufato dufaanta Luban waxaana farnay in ay dadka u sheegaan inay is uruursadaan”.ayuu yiri Cabdulahi Xaashi Cayrow.
Cabdulahi Xaashi Cayrow ayaa kaluumeysata ugu baaqay inaysan badda gelin inta ay socoto duufaanta Luban.
“Dadka waxaan kaloo uga dignay in aysan doomo kalluumaysi badda la gelin inta ay duufaantu socoto, waxaan kaloo farnay in reer miyiga ay ka uruursadaan meelaha biyo mareennada ah iyo dhulalka dooxooyinka ah si ay uga nabad galaan daadadka ka dhalan kara roobabka xoogga leh ee duufaanta la socda” ayuu yiri Ceyrow.
Madaxa hay’adda ka hortaga masiibooyinka Puntland Cabdulahi Xaashi ma sheegin wax ka maamul ahaan uga qorsheysan daad gureynta dadka ku nool meelaha duufaanta ku soo fool leedahay.
Deeganno ka tirsan maamulka Puntland ayaa waxaa horey ugu dhufatay dufaano wata deyblo iyo roobab kuwaasoo dad iyo duunyaba ay gallaaftay.